လိင်မှု ဘဝကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါများ - Hello Sayarwon
Arkar Hein မှ ရေးသားသည်။ 12/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသော လိင်မှုဆက်ဆံရေး ရှိဖို့ ဆိုတာ အိမ်ထောင်ရေး ဘဝရဲ့ သာယာမှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်က ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေး ဂရုမစိုက်ခဲ့လို့ ရောဂါတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ လိင်မှုဘဝကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် နည်းပါးလာခြင်း၊ လိင်စိတ်မထကြွနိုင်ခြင်းနဲ့ လိင်စိတ် အထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ လိင်မှု ဘဝအတွက် ဘာပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာ ကြိုသိထားမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘဝကောင်းမွန်စေဖို့ အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီလို သာမန်ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို ပွင့်လင်းစွာပြောပြထားတဲ့ပြီး ဆရာဝန်များနဲ့ တိုင်ပင်ကုသခြင်းက ကျန်းမာရေးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ လိင်မှု ပြဿနာတွေကို လျော့ကျစေနိုင်မှာပါ။ လိင်မှုဘဝကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ သာမန်ရောဂါတွေကတော့
သွေးထဲ သကြားပါဝင်မှု မြင့်မားနေတဲ့အခါ သွေးကြောတွေနဲ့ နာဗ်ကြောတွေ ပျက်ဆီးလာနိုင်စေပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါတွေဆိုတာ သွေးကြောတွေနဲ့ အဓိက ပတ်သက်နေတဲ့အတွက် သွေးကြောပျက်ဆီးမယ်ဆိုရင် လိင်အင်္ဂါထံသို့ သွေးစီးဆင်းမှု နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်လာမယ့် ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ အမျိုးသားတွေဆိုရင် ထောင်မတ်ခြင်းနဲ့ သုက်ထွက်မှု ပြဿနာများ။ အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်နည်းပါးခြင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံချိန်နာကျင်ခြင်းနဲ့ အထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း စတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် ဆီးချိုရောဂါကို ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားဖို့လိုပြီး ကိုယ်လက်အားကစားလုပ်ခြင်းနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသုံးခြင်းက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် လိင်မှုဘဝအတွက်လည်း ကောင်းမွန်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါလိုပဲ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သွေးကြောတွေထိခိုက်နိုင်ပြီး လိင်မှု ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးဖိအား မြင့်မားနေခြင်းက လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် အစားအသောက်နဲ့ အားကစားဆိုတဲ့ နေထိုင်မှု ပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လိင်မှုပြဿနာတွေကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ နှလုံးလုပ်ဆောင်မှု ရပ်တန့်ခြင်း ( heart attack) ဖြစ်ဖူးလို့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် heart attack ထပ်မံ ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း ချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ရောဂါရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုကတော့ လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် နည်းပါလာခြင်းပါပဲ။ ဒီတော့ ဒီလို စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း ရောဂါ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် အကြံပေးများနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ နေထိုင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆေးဝါးမှီဝဲခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပြီး ကုသနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တချို့သော စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေတဲ့ ဆေးဝါးများဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်စိတ်ကို နည်းပါးစေပြီး ထောင်မတ်မှု ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ဒီလိုဆေးများကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လျှော့သောက်ခြင်း၊ ဆေးပြောင်းလဲသောက်သုံးခြင်းဖြင့် လိင်မှု ဘဝကို မထိခိုက်လာအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
သင်မှာ ကင်ဆာရောဂါရှိနေမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ သင်နောက်ဆုံးမှ တွေးမိမယ့် ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သင်က လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင် Cancer ရောဂါ နဲ့ ကုသမှုတွေကြောင့် လိင်ဆက်ဆံရတာ ခက်ခဲနေမှာပါ။
ကင်ဆာရောဂါ ကုသရာမှာ အတွေ့ရများတဲ့ ဓာတုကုထုံးတွေနဲ့ ကုသမှု ခံယူနေရမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက် အရမ်းပင်ပန်းနေခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် နာကျင်နေခြင်း၊ ဟော်မုန်းကုသမှုတွေကြောင့် လိင်စိတ်နည်းပါးခြင်းနဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေကြောင့် မိမိကိုယ်ကို မြင်တဲ့ အမြင် နည်းပါးနေခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် အသင့်မဖြစ်မချင်း တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့သာရင်းနှီးမှု ယူနိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည်နာကျင်မှု ဝေဒနာရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက် တွေးဖို့ကိုတောင် တော်တော်ခက်ခဲနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်မှီဝဲနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေက နာကျင်မှုကို မပျောက်ကင်းစေနိုင်ဘူးဆိုရင် ဆေးဝါးများကို ပြောင်းလဲသောက်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီလို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကြောင့်လည်း လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ပြဿနာ ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတစ်ချို့က အာရုံကြောကို သက်ရောက်နိုင်တဲ့ဆေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်အပေါ်ကိုလည်း သက်ရောက်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို အချိန်မျိုးမှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အဆစ်အမြစ်တွေရောင်ရမ်းတဲ့အခါမှာလည်း လိင်ဆက်ဆံဖို့ အတွက်ခက်ခဲနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဆစ်အမြစ်ရောဂါ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင် လိင်မှုဘဝမထိခိုက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေက ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့-
သင့်အနေနဲ့ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကောင်းဆုံးလို့ ခံစားရတဲ့အချိန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။
ဆေးဝါးများကို လိင်မဆက်ဆံခင် မိနစ် ၃၀ လောက်အလိုမှာ သောက်သုံးထားပါ။
သင့်ရဲ့ အဆစ်အမြစ်တွေကို ခေါင်းဦးများနဲ့ ခုခံထားပါ။
လိင်မဆက်ဆံမီ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးတဲ့အနေနဲ့ နာကျင်နေတဲ့ ကြွက်သားများကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။
ပင်ပန်းတတ်မယ်ဆိုရင် လိင်မဆက်ဆံခင် ကြိုအိပ်ထားပါ။
၇။ တက်စတိုစတီရုန်း ဟော်မုန်း နည်းပါးခြင်း (Low Testosterone (Low T))
တက်စတိုစတီရုန်း ဟော်မုန်းနည်းပါးတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်စိတ်က သိသိသာသာ နည်းပါးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ တက်စတိုစတီရုန်းဟော်မုန်းနည်းပါးနေရခြင်းက ဝှေးစေ့တွေကို တက်စတိုစတီရုန်း ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ထိန်းချုပ်နေတဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါ Type (2) ၊ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေရှိရင်လည်း တက်စတိုစတီရုန်း ဟော်မုန်းနည်းနိုင်ပါတယ်။ တက်စတို စတီရုန်း ဟော်မုန်းနည်းနေလားဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် သွေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဆေးစစ်ချက်အရလည်း နည်းနေမယ်ဆိုရင် နေထိုင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ အားကစားပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ တက်စတိုစတီရုန်း ဟော်မုန်း အစားထိုး ကုသခြင်းဖြင့်လည်း ကုသနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးဆုံးချိန်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း ပမာဏက သဘာဝအတိုင်းကျသွားပြီး ဓမ္မတာ လာတာလည်း ရပ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မွေးလမ်းကြောင်းလည်း ခြောက်သွေ့သွားနိုင်တဲ့အတွက် မွေးလမ်းကြောင်း စိုစွတ်ခရမ်များနဲ့ ချောဆီများသုံးပြီး လိင်ဆက်ဆံချိန် မနာကျင်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မွေးလမ်းကြောင်းထဲ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း ပမာဏ အနည်းငယ်ထည့်သွင်းခြင်းကလည်း ခြောက်သွေ့ခြင်းနဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း ကြွက်သားအားနည်းခြင်းကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သွေးဆုံးချိန် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူဓာတ်ကိုခံစားမယ်ဆိုရင်ဟော်မုန်းအစားထိုး ကုသမှုတွေကလည်း အဖြေတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
၉။ HIV and AIDS။
HIV ဟော်မုန်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း အထိခိုက်ခံရတဲ့ ဟော်မုန်းတွေထဲမှာ တက်စတိုစတီရုန်းနဲ့ အီစထရိုဂျင်လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် နည်းပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဆေးများသောက်သုံးခြင်းကလည်း လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ကို နည်းပါးစေမှာပါ။ Protease inhibitors (PIs) လို့ခေါ်တဲ့ HIV/AIDS နဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ C ကုသရာမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပုံပွားခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ ဆေးဝါးတွေကလည်း
အမျိုးသားတွေမှာ ထောင်မတ်မှု ပြဿနာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ အာရုံကြော ရောဂါ (Multiple Sclerosis (MS))။
လိင်စိတ်ဟာ ဦးနှောက်ကနေ စတင်တာပါ။ ဦးနှောက်ကနေ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေထံကို ဦးနှောက်မှ အာရုံကြော အချက်ပြချက်တွေကို ကျောရိုးနာဗ်ကြောတစ်လျှောက်ပို့လွှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Multiple sclerosis (MS) ဆိုတဲ့ရောဂါကျတော့ နဗ်ကြောတွေကို ဖုံးပေးတဲ့ myelin ဖိုင်ဘာတွေကို ပျက်ဆီးစေတဲ့အတွက် ဦးနှောက်နဲ့ ကျန်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ ဆက်သွယ်ရခက်စေပါတယ်။ ဒီလို ပျက်ဆီးသွားတဲ့အခါမှာ လှုပ်ရှားမှု၊ လိင်စိတ်ထကြွခြင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံချိန် ခံစားချက် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရောဂါ ဟာ ကြွက်သားများအကြောဆွဲခြင်းကြောင့် နာကျင်စေနိုင်ပြီး ပင်ပန်းစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရောဂါကို ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများအပြားရှိတဲ့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ ပါကင်ဆန် ရောဂါ (Parkinson’s Disease)။
ပါကင်ဆန်ရောဂါဟာ ဦးနှောက်အတွင်းက ဒိုပါမင်း ဓာတု ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ နာဗ်ဆဲလ်များကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်တဲ့အခါ ကြွက်သားများတောင့်တင်းလာခြင်း၊ ကြွက်သားတုန်ယင်လာခြင်း၊ စကားပြောခြင်းနဲ့ လမ်းလျှောက်ရာမှာ ပြောင်းလဲလာခြင်းတို့ ဖြစ်လာမှာပါ။
ပါကင်ဆန်ရောဂါဟာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် လိက်ဆက်ဆံဖို့ အတွက်ခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးလာခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနဲ့ လိင်စိတ် အထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်း ပြဿာနာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါ ကုသရာမှာ ဒိုပါမင်းဆိုတဲ့ ဓာတု ပစ္စည်း ပမာဏ မြင့်တက်လာအောင်သောက်သုံးရတဲ့ ဆေးဝါးတွေကလည်း ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ရ ခက်ခဲလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သောက်သုံးရတဲ့ ဆေးပမာဏကို လျှော့ချသင့်ပါတယ်။
၁၂။ ဆီးအိမ် မထိန်းနိုင်ခြင်း။
ဒီဝေဒနာကတော့ အသက်အရွယ်ရနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အတွေ့ရများပြီး လိင်ဆက်ဆံချိန် ဝမ်းဗိုက်ပေါ် ဖိအားသက်ရောက်နေခြင်းက ဆီးထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မသက်မသာဖြစ်မှုကြောင့် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်နည်းပါးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကုသဖို့ အတွက်ကတော့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ လိင်မဆက်ဆံခင် ဆီးကြိုတင်သွားထားခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာဝန်များနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကုသမှု ခံယူလို့ရပါတယ်။
၁၃။ အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်း Inflammatory Bowel Disease (IBD)။
အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်း ရဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ရောဂါတွေကတော့ အူမကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းနဲ့ မစင်အိမ်တို့မှာ အနာများပေါက်တဲ့ Ulcerative colitis နဲ့ အူမကြီး ရောင်ရမ်းတဲ့ Crohn’s disease တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါ ၂ ခုလုံးဖြစ်နေပြီဆိုရင် အပြင်းအထန် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ဝေဒနာတွေ ခံစားလာရပြီဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ပြဿနာ တက်တော့မှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဝေဒနာက သိပ်မပြင်းထန်သေးဘူးဆိုရင်တောင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးဝါးများကို ပုံမှန်သောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရောဂါ ပြင်းထန်လာမယ်ဆိုရင် အူလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ပြီး မစင်အိတ်ကို အပြင်ဘက်ထုတ်ထားရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိပါတယ်။
၁၄။ အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကို ခြောက်ခြားနေသော ဝေဒနာ(Posttraumatic Stress Disorder- PTSD )
Posttraumatic Stress Disorder ဟာ ကြောက်လန့်စရာ၊ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ လူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကြောက်လန့်စရာ ဖြစ်ရပ်ကြုံရတဲ့ လူတိုင်း ဒီဝေဒနာ မရကြပေမဲ့ အန္တရာယ်မရှိတဲ့အချိန်မှာတောင် စိတ်ဖိစီးပြီးကြောက်လန့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကို ခြောက်ခြားနေတဲ့ ဝေဒနာ (Posttraumatic Stress Disorder) ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီဝေဒနာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အတိတ်က ဖြစ်ရပ်များကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရပြီး ကြောက်လန့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ Posttraumatic Stress Disorder ရှိမယ်ဆိုရင် သာယာမှုထက် အကြောက်တရားက ပိုနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေဆိုင်းရာဆရာဝန်များနဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကုသမှု နည်းစနစ်များနဲ့ ဆေးဝါးများက ဒီ Posttraumatic Stress Disorder ကို အောင်အောင်မြင်မြင်ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပါတယ်။
Accessed (15. June. 2018)